တောင်နဲ့မြောက်ကိုရီးယား နှစ်နိုင်ငံကြားက စစ်မဲ့ဇုန်ဖြစ်တဲ့ Panmunjom မြို့မှာနှစ်နိုင်ငံက ကိုယ်စားလှယ်တွေ ဒီကနေ့တွေ့ ဆုံကြပါတယ်။
Cybersecurity အင်တာနက်ကွန်ယက်တွေ လုံခြုံရေး၊ မြောက်ကိုရီး ယားအရေးနဲ့ ရာသီဥတုပြောင်းလဲ လာမှု အကြောင်းတွေ ကို ဆွေးနွေးကြတဲ့ အမေရိကန်သမ္မတ နဲ့ တရုတ်သမ္မတတို့ရဲ့ ၂ ရက်ကြာဆွေးနွေးပွဲ ဟာ
ပြင်ဦးလွင်ကိုရောက်နေတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ဆန္ဒခံယူတုန်းက သူ ကန့်ကွက်မဲထည့်ခဲ့တဲ့အကြောင်း
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကို ပထမဆုံးအကြိမ် လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ် တဦးအဖြစ်နဲ့ ရောက်ရှိ လာတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရ ဦးရွှေမန်း အနေနဲ့ အစိုးရအကြီးအကဲ သမ္မတတဦးအဖြစ်
ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) မုံးကိုး၊ ကြူကုတ်၊ မုံးပေါ် ဒေသရှိ ဝိန်းဆိုင်ကျေးရွာ အုပ်စု၊ ဟူးကြီးရွာ၏ အနောက်ဘက် ချောင်း အနီး၌ ဇွန် ၈ ရက်က လက်နှစ်ဖက်၊ ခြေနှစ်ဖက်အား ကြိုးတုပ်ထားပြီး
FDA ထောက်ခံချက်လိုင်စင်ရရန် ငွေကြေးလာဘ်ထိုးမှုများကို အရေးယူမည်ဟု ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဆို
Monday, February 20, 2017 သတင်းများ No comments
အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးများ FDA ထောက်ခံ ချက်လိုင်စင်ရယူရန် ငွေကြေး လာဘ်ထိုးမှုများကို တိုင်ကြားပါ က တရားစွဲဆိုအရေးယူမည်ဖြစ် ပြီး ယင်းလုပ်ရပ်များကို လုံးဝ လက်ခံမည်မဟုတ်ကြောင်း ကျန်း မာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မြင့်ထွေးက ပြောကြားသည်။
Monday, February 20, 2017 ပြည်တွင်းသတင်း No comments
Monday, February 20, 2017 စီးပွားရေးသတင်း No comments
Monday, February 20, 2017 အိမ်ခြံမြေသတင်း No comments
ပါကစ္စတန်က ဆူဖီဘုရားကျောင်းကို အသေခံတိုက်ခိုက်၍ လူ ၇၂ သေဆုံး
Friday, February 17, 2017 နိုင်ငံတကာသတင်း No comments
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းက မွတ်စလင်ဆူဖီဘုရားရှိခိုးကျောင်းတစ်ခုမှာ ၀တ်ပြုသူတွေရှိနေချိန် အသေခံတိုက်ခိုက်၍ လူပေါင်း အနည်းဆုံး ၇၂ သေဆုံးပြီး ၇၀ ကျော်ထက်မနည်း ဒဏ်ရာရတယ်လို့ တာဝန်ရှိသတင်းရင်းမြစ်တစ်ရပ်က EFE သတင်းဌာနကို ပြောပါတယ်။
Friday, February 17, 2017 အိမ်ခြံမြေသတင်း No comments
Friday, February 17, 2017 ပြည်တွင်းသတင်း No comments
Subscribe To Get Free Tricks Daily !
STD, ကုသမှု, လမင်းကို, ဆေးဝါး မေး။ ။ ကျွန်တော် အသက် ၂၉ ရှိပါပြီ။ ကျွန်တော် လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ နှစ် ၄ လလောက် တုန်းက လိင်ပျော်မိ ပါ...
ကျွန်မသာ ညဉ့်ငှက် တစ်ကောင်ဆိုရင် ရှင်လက်ထပ်မလား(၀မ်းနည်းဖွယ် ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်)
ကျွန်မမှာအိမ်မရှိဘူး။ ကျွန်မအိမ်ပေါ်က ဆင်းလာတုန်းက အမေက မျက်ရည်စက်လက်နဲ့ မသွားဖို့ တားတယ်။ အဖေက “သွား... သွားပြီးရင် ဘယ်တော့မှ ...
အိမ်ထောင်ထပ်ပြုဖို့ စိတ်မဝင်စားသေးတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ စကား
သရုပ်ဆောင် ခိုင်နှင်းဝေ (ဓာတ်ပုံ – မြတ်သူအောင် / ဧရာဝတီ) ကိုယ်က တကယ်ချစ်ပေမယ့် အချစ်ကို အလိမ်ခံရတဲ့ မိန်းမတယောက် အဖြစ် ဇာတ်ကား...
Wisdom Teeth အံဆုံးဆိုတာ လူကြီးသွား စုစုပေါင်း (၃၂) ချောင်းထဲက အထက်-အောက်၊ ဘယ်-ညာ နောက်ဆုံးက သွား (၄) ချောင်းကိုခေါ်တာ ဖြစ်တယ်။ တိတိကျ...
Copyright © မြန်မာ့ရောင်စဉ် | Powered by Blogger
Design by Myanma Spectrum